Ishadi | Okthoba 2021
Kusho ukuthini lapho inyanga ihlangene neMars?
Kusho ukuthini lapho inyanga ihlangene neMars? Lokhu kuhlangana kunika abantu isibindi, uthando lokuzidela kanye nekhono lokuthola izixazululo ezingavamile. Endaweni yomndeni bazi kahle ukuthi bafuna ini futhi kunzima ukubakholisa ukuthi abanye banelungelo lokuthola indawo yabo.
Kusho ukuthini inyanga ngokuhlangana kweMercury?
Kusho ukuthini inyanga ngokuhlangana kweMercury? Ngokuhlangana kweNyanga yeMercury eshadini lakho lokuzalwa, kungenzeka ukuthi uzwakalise ukukhuluma kwakho futhi ube muhle ngamagama, noma ngabe lesi sambulo singafika kamuva empilweni. Njengoba kwenzeka ukuhlangana kweNyanga i-Mercury transit, uyamenywa ukuthi uveze imizwa yakho ngokukhululeka futhi ube nothando kakhulu kunokujwayelekile. 2019.
Ishadi lakho lokuzalwa likutshelani?
Ishadi lakho lokuzalwa likutshelani? Kafushane nje, ishadi lakho lokuzalwa lichaza ukuthi amaplanethi ayesephi esibhakabhakeni ngosuku nesikhathi sokuzalwa kwakho. 'Kuyisithombe noma imephu yesimo samaplanethi noma sezinkanyezi ngesikhathi sokuzalwa kwakho,' kusho uNymph waseNeptune. 'Iplanethi ngayinye inomphumela ohlukile esicini esithile sempilo yethu, futhi lokhu kukhanyisa lokho. '31. 2020.
Ngizithola kanjani izici eshadini lami?
Ngizithola kanjani izici eshadini lami? Uzibona kanjani izici ngokubheka ishadi? Isinyathelo sokuqala: Ngekhanda into nemodi yesibonakaliso ngasinye. Zifunde kahle. Isinyathelo sesibili: ngekhanda izinto zomlingani Kulula uma wazi izinto zakho. Isinyathelo sesithathu: ngekhanda ngazimbili ezihlukile. Kufanele ukwazi ukukubona lokhu futhi.
Zimeleni izindlu eziyi-12 zeshadi lokuzalwa?
Zimeleni izindlu eziyi-12 zeshadi lokuzalwa? Eshadini lakho lokuzalwa, wonke amaplanethi afafazwa ezindlini eziyi-12 zezinkanyezi, ngayinye emele indawo ehlukile yokuphila kwakho. Isethi yesibili yezingcezu ezigqagqene eshadini lokuzalwa zimele izimpawu eziyi-12 zezinkanyezi, futhi lokhu kungabukeka kwehlukile kuwo wonke umuntu. 2018.
Wenza kanjani ishadi lokuqala lomhlangano?
Wenza kanjani ishadi lokuqala lomhlangano? Amashadi Womhlangano Wokuqala akhombisa ukuthi yimaphi amandla akhona phakathi nomhlangano okusiza noma okuvimbela ukuthuthuka kwawo. Ungalenza kanjani Ishadi Lokuqala Lomhlangano: Dala Ishadi LaseNatali ngendlela efanayo obuzokwenzela ngayo umuntu, kodwa sebenzisa isikhathi nendawo lapho uhlangane khona nomunye umuntu KUMUNTU.
Ngabe ukuthola kanjani ukubuyela emuva eshadini lokuzalwa?
Ngabe ukuthola kanjani ukubuyela emuva eshadini lokuzalwa? Ukuhlola nokubona ukuthi unayo yini iplanethi ehlelwa kabusha eshadini lakho lokuzalwa iya ku-astro.com> i-horoscope yamahhala> ukukhethwa kweshadi okwandisiwe ukudala ishadi lakho. Ngemuva kwalokho, uma ubheka etafuleni lokubekwa kweplanethi ungabona u-'r 'eduze kwendawo okukuyo iplanethi, ukukwazisa ukuthi iphinda ihlelwe kabusha. 2016.
Kusho ukuthini lapho iLanga lihlanganisa iMercury?
Kusho ukuthini lapho iLanga lihlanganisa iMercury? Ukuhlangana kwendalo phakathi kweLanga neMercury kusho ukuthi ingqondo yakho kungenzeka iyala phezu kwenhliziyo yakho uma kukhulunywa ngezinqumo ezibalulekile zempilo. Ngesikhathi sokuhamba kweSun conjunct Mercury, sivame ukugxila kakhulu ezindabeni zomqondo nezokuxhumana, lesi isikhathi esihle kakhulu.2. 2020.
Kusho ukuthini iSun conjunct ascendant?
Kusho ukuthini iSun conjunct ascendant? I-Sun conjunct Ascendant natal inika izimfanelo ezidingekayo ukuze ube ngumongameli noma inkosi. Ukuzalwa ekuphumeni kwelanga kukwenza uqaphele. Wenza samuntu ukushisa nokukhanya nokuqhuma kwamandla anika impilo njalo lapho kuphuma ilanga. Ukugqama kobuntu bakho kukunikeza ubukhona obuyalayo. 2017.
Kwenzekani lapho iJupiter ibheka ilanga?
Kwenzekani lapho iJupiter ibheka ilanga? Ilanga libuye libe umsebenzi nezinhloso zomuntu oyedwa, ngakho-ke i-Jupiter iyayihlanganisa noma ikufake engxenyeni ethile kuzokwenza umuntu abe nezinhlelo ezinkudlwana, ezinesibindi, ezinhle kakhulu eziphefumulelwe kanye nendlela yokufinyelela ezinhlosweni zabo, umsebenzi kanye nempilo, yingakho-ke abantu abanenhlanganisela le bengabhekwa ababonisi futhi bangafeza izinto ezinkulu empilweni!
Kusho ukuthini uma ilanga nenyanga yami kuhlangene?
Kusho ukuthini uma ilanga nenyanga yami kuhlangene? Ngakho-ke, lapho umuntu enenyanga yokuhlangana kwelanga, kuphephile ngandlela thile ukuyichaza njengomthamo ophindwe kabili webhizinisi elifanayo. Ilanga liqondaniswe nencazelo 'yokufuna, kanti inyanga isho' izidingo '. Ngale ndlela, abantu abanjalo bathambekele ekugxileni entweni eyodwa ngoba izidingo nezidingo zabo ziyefana.
Kusho ukuthini iSun conjunct Pluto?
Kusho ukuthini iSun conjunct Pluto? I-Sun conjunct Pluto yilapho ukukhanya nobumnyama kungqubuzana khona. ILanga ubuwena, kungukuthi ungubani. I-Sun conjunct Pluto izokukhombisa lapho wenqaba khona ukubona iqiniso lokuthi ungubani (iLanga) ngoba lokhu kuzosho ukubhekana 'nohlangothi olumnyama'. I-Sun conjunct Pluto izokucela ukuthi ubhekane neqiniso lokuthi ungubani ngempela. 11. 2019.
Kwenzekani uma izici zikaSaturn zelanga?
Kwenzekani uma izici zikaSaturn zelanga? Uma i-Sun ne-Saturn zakha isici esinzima ku-horoscope yakho, i-Saturn (umsebenzi, impumelelo) iboshelwe ngokungenakuphikiswa kunhloso yakho yokuphila (iLanga). Lokhu kusho ukuthi ulapha ukuthuthukisa izimfanelo zaseSaturni ezinjengokuzikhuza, ubuqotho nokugxila ukuze ufeze izinhloso zakho. 2017.
Ngabe isondo lami lokuzalwa lisho ukuthini? Umbuthano wokuqala uyisondo lezinkanyezi. Izingcezu eziyi-12 zimele izimpawu eziyi-12 zezinkanyezi. Umbuthano wangaphakathi lapho umele umhlaba. Ku-horoscope yakho yomuntu siqu (ishadi lakho lokuzalwa), lowo mbuthano wangaphakathi umele izixhumanisi, noma indawo ngqo, yendawo ozalelwe kuyo.
Kungani iDon TI ihlobene neshadi lami lokuzalwa?
Kungani iDon TI ihlobene neshadi lami lokuzalwa? Okunye okungenzeka ukuthi awuthintani nokuthi ungubani ngasizathu simbe. Kungenzeka ukuthi uhlupheke kakhulu noma wahlukunyezwa ngokomzwelo useyingane kangangokuba ucindezela ubuntu bakho beqiniso noma uphika. Cishe wonke umuntu unezici angazithandi, ezizovela eshadini labo lokuzalwa.
Ngilicubungula kanjani ishadi lami lokuzalwa?
Ngilicubungula kanjani ishadi lami lokuzalwa? Thola uphawu lwakho.Kushadi lakho lokufundwa kwezinkanyezi, kudonswa umuntu omncane emhlabeni omaphakathi. Umuntu udwetshwe phezulu kwephuzu lobude bendawo ozalelwa kuyo. Izinkanyezi, amaplanethi, nezimpawu kudwetshiwe maqondana nokuthi zavela kanjani ngosuku lwakho lokuzalwa.
Kukuyiphi iNdlu eshadini lami?
Kukuyiphi iNdlu eshadini lami? Thola uChiron eshadini lakho lezinkanyezi. Imvamisa ibizwa ngokuthi 'umphilisi olimele,' uChiron uyi-asteroid ezungeza isimiso sethu sonozungezilanga phakathi kwe-Uranus neSaturn. Isibonelo, njengoba uBenson ebhala kwi-Mystical AF, uChiron wakhe wendalo useGeminithe uphawu lokuxhumana endlini yesihlanu yobuciko. 22. 2020.
Kusho ukuthini uChiron eshadini lakho lokuzalwa?
Kusho ukuthini uChiron eshadini lakho lokuzalwa? Ubuhlungu Nokuphulukiswa
Uyini umehluko phakathi kwamashadi ahlanganisiwe nawama-synastry?
Uyini umehluko phakathi kwamashadi ahlanganisiwe nawama-synastry? Amashadi ahlanganisiwe asuselwa kwisayensi yamaphakathi nendawo futhi ngokungafani ne-synastry eqhathanisa, ihlanganisa amashadi womabili libe linye elichaza ubudlelwano babantu ababili.